Go’aankii Madaxweyne Trump oo Soomaali badan ka hor istaagay gudashada waajibaadka Xajka. – Balcad.com Teyteyleey
Go’aankii Madaxweyne Trump oo Soomaali badan ka hor istaagay gudashada waajibaadka Xajka.
Iyadoo loo diyaar garoobayo gudashada waajibaadka Acmaasha Xajka, ayaa Soomaalid kunool dalka Mareykanka waxay walaac ka muujinayaan arrimahaasi,gaar ahaan dadka aan haysanin sharciga dalkaasi.
Walaaca ay muujinayaan dadka Soomaaliyeed ayaa la xiriira diidmadii madaxweyne Donal Trump ee ahayd socdaalka muwaadiniinta ilaa 6 dal oo Soomaaliya ay kujirto in aysan wadnkaasi u socdaali Karin.
Qaar kamid ah dadkaasi ayaa sheegay in documentiyadooda oo ay ku aadi lahaayeen Xajka dib loogu soo celiyay, iyagoo lagu wargeliyay in aanay jirin damaanad ku aadan soo laabashadooda, taasi oo keentay, walwalkan ay qabaan.
Xuseen Cabdi Max’ed iyo C/fataax Cumar oo kamid ah dadka isku diyaarinayay gudashada waajibaadka Xajka ayaa sheegay in ay caqabad xoogan ka haysato dhanka socdaalka, mar haddii aanay dib ugu soo laaban Karin dalka,waxaana ay intaasi ku dareen in ay haysataan sharciyo yer yer balse aanay u kala cadeyn in arintaasi ay saameynayso iyo in kale.
“Magacaygu waa C/fataax Cumar wadankan muddo ayaan deganahay, waxaan ku faraxsanahay in aan fursad u hello viisaha aan ku soo gudanayo waajibaadka Xajka, balse waxaan ka cabsanaynaa in aan dib u soo laabanweyno, una nasaameeyo go’aankii madaxweyne Trump.
Saameyntii ka dhalatay go’aankii uu madaxweyne Trump saxiixay ayaa sii kordhaysa,waxaan weli taagan jahwareer haysta dhamaan bulshooyinka ka soo jeeda wadamada kujira liiskaasi.
The post Go’aankii Madaxweyne Trump oo Soomaali badan ka hor istaagay gudashada waajibaadka Xajka. appeared first on Ilwareed Online.
Warar ku saabsan Weerar ka dhacay Guriceel
Muqtaar Roobow oo Muqdisho ku qabtay shir jaraa’id